मैदानमा सिटौला र लिङ्देन । कस्को पल्ला भारी ? (हेर्नुहोस् भिडियो) « epurwa
प्रकाशित मिति : १७ कार्तिक २०७४, शुक्रबार ०८:१४
झापा, कार्तिक १७ । आसन्न दोस्रो चरणको प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ३ मा रोचक भिडन्त हुँदैछ । केन्द्रमा काँग्रेस र राप्रपाबीच गठबन्धन हुने सहमती भएपनि झापामा भने त्यसको ठीक विपरीत एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाबीच गठबन्धन भएपछि प्रतिस्पर्धा रोचक मोडमा पुगेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र राप्रपा महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन अलग–अलग गठबन्धनबाट झापा–३ का उम्मेद्वार बनेका छन् । सिटौलाको प्रस्तावकमा क्षेत्रीय सभापति गणेश पोखरेल र समर्थकमा महाधिवेशन प्रतिनिधि खड्गप्रसाद राजवंशी रहेका छन् । नेता सिटौलाले झापामा एमाले, माओवादी र राप्रपाबीचको गठबन्धनले आफुलाई अच्चमित बनाएको बताउनुभयो । त्यस्तै, झापा क्षेत्र नं. ३ बाटै वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिनुभएका राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले समयको मागअनुसार गठबन्धन गरिएको र आफ्नो जित शुनिश्चत बनेको जिकिर गर्नुभयो । उक्त क्षेत्रमा कांग्रेसले सिटौलालाई उम्मेदवार बनाएपछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट अलगिएर वाम गठबन्धनको समर्थनमा लिङ्देन उम्मेदवार बन्नुभएको हो ।
सिटौला–लिङ्देनवीच पहिलो चुनावी भिडन्त ०५६ को आम निर्वाचनमा भएको थियो । तत्कालिन झापा १ बाट सिटौला–लिङ्देन लडेका थिए । तर, सिटौला विजयी भए । ०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावमा लिङ्दने उम्मेदवार थिएनन् । त्यसबेला सिटौलालाई माओवादी नेता पूर्णसिंह राजवंशीले भारी मतले पराजित गरेका थिए । ०७० को दोस्रो संविधानसभामा लिङदेन पुनःउम्मेवार बने । त्यस बेला उनका निकटतम प्रतिष्पर्धी फेरि पनि सिटौला थिए । सिटौलाले त्यस क्षेत्रबाट दोस्रो पटक जितेका थिए । पछिल्लो पटक सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ३ राप्रपाका लागी फापेको क्षेत्र हो । जहाँ राप्रपाले कचनकवल र हल्दिबारी गाउँपालिकाको अध्यक्ष सहित अधिकाशं पदमा विजयी बन्दा काँगेस सिटौलाको गृहनगर भद्रपुरमा समेत पराजित बन्यो । स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख पदहरुमा खसेको मतलाई आधार मान्ने हो भने यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले २० हजार २२ मत प्राप्त गरेको थियो । जसमा राप्रपाले १३ हजार ७ सय ५० मत पाएको थियो । एमालेले १५ हजार ५ सय ६२ मत पाउँदा माओवादीले ८ हजार ९ सय ९१ मत पाएको थियो । एमाले र माओवादीको मत जोड्दा २४ हजार ५ सय ५३ पुग्छ । यदि यो मत लिङ्देनलाई जाने हो जीतका लागि सिटौला निकै कठीन मोडमा पुगेका छन् ।